सस्तो चामलमा महँगो प्लास्टिक किन मिसाउलान् व्यापारीले ? « Bikas Times
सस्तो चामलमा महँगो प्लास्टिक किन मिसाउलान् व्यापारीले ?
काठमाडौ. । काठमाडौंको बजारमा चामल प्रतिकेजी ७०–८० मा राम्रै गुणस्तरको पाइन्छ । यहि चामल अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि यस्तै दरमा पाइन्छ । मोटर सुविधा नपुगेका क्षेत्रबाहेकमा चामलको मूल्य उति धेरै तलमाथि छैन ।
अब प्लास्टिकको चामलको चर्चा गरौं । पर्वतको कुस्मामा प्लास्टिकको चामल भेटिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यस्ता खबर यसअघि अन्यत्रबाट पनि नआएको होइन । कुश्मा बजारका प्रेम जैसीले किनर ल्याएको चामलबाट पकाएको भात रबरको बल जसरी उफ्रेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।
प्लाष्टिकको चामल भेटिएको खबरपछि गणेश खाद्य उद्योग चितवनले उत्पादन गरेको चामल विक्री विरणमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के प्लास्टिकको चामल व्यापारीले बिक्री गर्छन् त ?
यदि हामीले मूल्यमा ध्यान दियौं, भने त्यस्तो सम्भावना छैन । किनभने एक केजी चामल ८० रुपैयाँमा आउँदा एक केजी प्लाष्टिकको मूल्य २ हजारको आसपासमा पुग्छ । उदाहरणका लागि हामीले पानी पिउने ५० ग्रामको प्लाष्टिकको बोतल कै १०० रुपैयाँ पर्छ । प्लाष्टिकका अन्य भाँडा बर्तन पनि उत्तिकै महँगा छन् । पोलिथिन ब्यागकै कुरा गर्दा पनि चामल भन्दा प्लाष्टिक महँगो छ भन्ने स्पष्ट छ ।
अब कुनै पनि ब्यापारीले महँगो प्लाष्टिक सस्तो चामलमा मिसाएर बेच्ला ? मिसावट गर्नेको उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ । महँगो वस्तुमा सस्तो कुरा मिसाउन पाउँदा मात्रै हो व्यापारीले बदमासी गर्ने ।
जहाँसम्म चामलको कुरा छ, चामलमा मिसावट नै भएको भए पनि प्लाष्टिक चाहिँ होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।